Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. हराइरहेको भारतीय वायु सेनाको जहाज अझै फेला परेन – Emountain TV
हराइरहेको भारतीय वायु सेनाको जहाज अझै फेला परेन
एजेन्सी, २७ जेठ । एकसाता अघि हराएको भारतीय वायुसेना को विमान एएन–३२ अहीलेसम्म पनि पत्ता लाग्न नसकेको जनाइएको छ । उक्त बिमान गत हप्ता असमको जोराहटबाट अरुणाञ्चलका लागि उडेको थियो ।
विमानमा चालक दलका आठ जना र अन्य यात्रु पाँचजना गरी १३ जना रहेका छन् । बिमानको खोजी कार्य तीब्रताका साथ गरिएपनि हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
विमानको अन्तिम लोकेशन अरुणाचल प्रदेशको पश्चिम सिन्याग जिल्लामा चीनको सीमा नजिक फेला परेको थियो । उक्त बिमान सोही क्षेत्र आसपास रहेको हुनसक्ने अनुमान गर्दै खोजी कार्य गरिएको भए पनि विमान फेला परेको छैन ।
रूसमा निर्मित दुइवटा इन्जिन भएको ट्रबोप्राप उक्त जहाज भारतीय सेनाले विशेष गरी सेना र मालसामान ढुवानीका लागि प्रयोग गर्दै आएको थियो। विमान हराइरहेको क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले कठिन हुनुका साथै घना जंगल रहेको बताइएको छ ।
जहाज खोजीका लागि भारतीय सेनाले भएभरको संयन्त्र प्रयोग गरेको दाबी गर्दै आए पनि अहिलेसम्म विमान र त्यसमा रहेका यात्रुका बारेमा कुनै पनि सूचना प्राप्त गर्न सकेको छैन । खोजी कार्यमा ठोस प्रगति नभएपछि भारतीय वायु सेनाले बेपत्ता विमानका बारेमा भरपर्दो सूचना दिनेलाई ५ लाख भारतीय रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ ।